चलचित्र टिकटसँगै डसना र सिरानी !
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ पौष ११ सोमबार |
एजेन्सी । तपाईं चलचित्र हेर्न जाने समयमा सारै थकित हुनुभएको छ ? आरामदायी तरीकाले सिनेमा हेर्न पाए पनि हुने थियो भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन ।
तपाईंले अब सुती सुती सिनेमाको मज्जा लिन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सिनेमा हलमा नै । दक्षिण कोरियाको सोलस्थित गङनममा रहेको एक मल्टिकम्प्लेक्स सिनेमा हल सीजेसीजीभीले अब टिकटसँगै डसना र सिरानी पनि उपलब्ध गराएको छ ।
यति मात्र होइन, ३५ डलर तिरेर टिकट लिएपछि आरामसँग सिनेमाको मज्जा लिने मात्र नभई पेय पदार्थ तथा कुकिज पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यस्तै कोट झुण्डाउने र मोबाइल चार्जरको सुविधासमेत उपलब्ध रहेको बताइएको छ ।
यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा सिनेमा हलका महाप्रबन्धक किम जी ताईले ग्राहकको मागअनुसारको सुविधा दिन आफू पछि नपरेको बताएका छन् । कोरियामा मानिसहरुले आजकाल धेरैभन्दा धेरै सुविधा खोजिरहेको समयमा आफूले पनि यसमा हिस्सा लिएको उनले बताए । सिनेमाका पारखीलाई दिइने मनोरञ्जन यति मै सीमित हुँदैन ।
यस सिनेमा हलमा पछिल्लो ब्लगबष्टर सिनेमा हेरे तपाईंलाई अर्को आकर्षक उपहार पनि मिल्नेछ । त्यो हो, सँगैको भवनमा रहेको फ्रेञ्च–इटालियन रेष्टुरेण्ट सिने दी शेफमा डिनरको व्यवस्था । तपाईंलाई लाग्ला, यस्तो भएपछि त्यहाँ ग्राहकको लाइन त सधैं रहिरहला तर होइन ।
भ्यालेण्टाइन डे, क्रिसमस र नयाँ वर्ष जस्ता पर्वमा मात्र त्यहाँको सिनेमा हल लगभग भरिन्छ । अरु बेला आधाभन्दा अलि बढी । त्यसो भए अब तपाईंलाई जिज्ञासा लाग्ला, डसना कति दिनमा फेरिन्छ त ?
यसको पनि काइदाकै नियम छ त्यहाँ । जाडो समयमा प्रत्येक २ सिनेमाको प्रदर्शनीपछि फेरिन्छ भने गर्मीयाममा हरेक सिनेमा प्रदर्शनीपछि ।
‘नियमित सिनेमा टिकटभन्दा यो निकै महँगो भए पनि विशेष सुविधा खोज्ने ग्राहककै लागि यो सेवा हो, सुविधा खोज्नेले कहिलेकाहीं यो रकम तिरिहाल्छन्,’ ताईले भनेका छन् ।
गायक पुष्कल शर्माको 'आमालाई अन्तिम चिठी' बजारमा (भिडियो सहित)
गायक मनोज विक र सविना पन्तको ‘मेरो पालो कैले ’ भनेपछि...(भिडियो सहित)
टेम्के तुवाचुङ पुरस्कार गायिका राधालाई
प्रतीक ब्लोन तामाङको 'बनको बाटो उकाली ओराली' सार्वजनिक (भिडियो सहित)
टिका सुदिश निरौलाको 'खुशी हुदाँ ' लिरिकल (भिडियो सहित)
छुल्ठिम र नीपुनको ‘तिमी मान या नमान’ सार्बजनिक (भिडियो सहित)
गायक सत्यराज आचार्यको आवाजमा नयाँ गीत 'चारैतिर जग्गे' (भिडियो सहित)
कान्छो निर्देशकको चलचित्र ‘हैरान’को टीजर सार्वजनिक
सुगम पोखरेलको 'तिमी मेरो जिन्दगी' सार्वजनिक (भिडियो सहित)
नृत्य प्रतियोगिताको उपाधि तामाङलाई, मिर्गौलापीडितलाई रु ८० हजार
प्रेमीकासँग शंकर बिसीको यस्तो रोमान्स ! (भिडियो सहित)